Xiisadda Ka Dhextaagan Imaaradka iyo Qatar Waxa ay Faa’ido u Tahay Iran, Maraykankase dani uguma jirto! – Goobjoog News
Dibloomaasi reer galbeed ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa yiri “ Marka aad aragto diyaaradaha Ciidanka Cirka ee Qatar oo ka agdhaw diyaarad rayid ah, waxa ay keeni kartaa shil sababi kara dhimasho dad, sidoo kalena horseedi kara xaalad aan hore looga arag waddamada Khalijka dhexdooda.”
Xoghayaha difaaca ee Maraykanka mudane James Mattis, waxa uu sheegay in xiriirka xumaaday ee xulafadiisa Khaliijku uu caqabad ku yahay dagaalka uu Maraykanku kula jiro Dawdaladda Islaamiga ah iyo “ka hortagga fididda saamaynta sunta ah ee Iran”.
Khaliijku, istaraatijiyad ahaan waa u muhiim Maraykanka maaddaama oo uu saldhigyo Milateri ku leeyahay Baxrayn iyo Qatarba. Afhayeen u hadlay ciidamada Maraykanka ee fariisinka ku leh Qatar ayaa yiri “Maraykanku waxa uu Qatar iyo Imaaraadkaba u arkaa saaxiibbo muhiim ah oo uu gobolka ku leeyahay,” waxa uuna ku baaqay in xiisadda la qaboojiyo iyada oo xal macquul ah la raadinayo.
“Sacuudiga iyo xulafadiisa kale cabsi weyn kama qabaan in xiisaddani ay saamayso dhaqaalahooda, Qatar ayaase ku dhibban” ayaa masuulku yiri.
Isha ugu muhiimsan ee xogta: Reuters World
Numbers as bringing freshman championship acting like jarryd
Somaliland: Go'aan Cusub Oo Ku Saabsan Kalluumeysiga